जुरेली किन यति घमण्डी ? तिजको मुखैमा जुरेलीले रामधुलाई भेटेपछी लि*ङ्गमा अड्कियो कुरा (हेर्नुस भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/जुरेली किन यति घमण्डी ? तिजको मुखैमा जुरेलीले रामधुलाई भेटेपछी लि*ङ्गमा अड्कियो कुरा (हेर्नुस भिडियो)
जुरेली किन यति घमण्डी ? तिजको मुखैमा जुरेलीले रामधुलाई भेटेपछी लि*ङ्गमा अड्कियो कुरा (हेर्नुस भिडियो)
नेपाली महिला रेस्लर तथा मोडल अस्मिता सुनार (जुरेली) पछिल्लो समय मोडल भन्दा पनि नेपाली रेस्लर बन्ने मोह बढेको छ । सुन्दर शरीरकी धनि अस्मिता ५ फिट ५ इन्च उचाई र ५५ किलोग्राम तौल भएकी छीन ।
मिलेको शरीर अनि आकर्षक ब्यक्तित्वकी धनि झट्ट हेर्दा लाग्दैन अस्मिता सुनार कुनै रेस्लर हुन । उनको शालीनता र मिलनसार स्वभाबले त झनै लाग्दैनकी ऊनि रेस्लर हुन तर रेस्लिङ रिङमा उनको स्वभाव फरक छ । अभिनय, नृत्यमा पोख्त अस्मिता मोडलिङ संसारमा पनि चिर परिचित नाम हो, त्यसो त अस्मिता मोडलिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् । दर्जनभन्दा बढी म्यूजिक भिडियो हरुमा उनको कुशल अभिनय देख्न पाइन्छ ।
नेपाली चलचित्र भुलभुलैयामा उनी खलनायिका पनि बनिन त्यस पछि २०७० सालमा नेपालको पहिलो महिला रेस्लर भगवती खड्कासँग उनको भेट भए पछि बाटो बदलियो । अनि, भरतबहादुर विसुराल ‘हिमालयन टाइगर’ सँग रेस्लिङ–कला सिकिन र अस्मिताबाट ‘जुरेली’ बनिन् ।
आज शुरु भएको खेलमा भने अस्मिताले रामधुलाई भेटेकी छिन । रिंगमा रामधुलाई भेटेपछि बाहिर आएर पत्रकारहरु संग कुरा गर्दा चर्काचर्की समेत परेको छ । आफु केटा भन्दा बलियो भएको समेत उनले दाबी गरिन । पुरा भिडियो तल हेर्नुहोला :
कोरोनाले लियो स्याङ्जाका युवा रोशन श्रेष्ठको ज्यान।
नेपालगञ्जका पहिलो सङ्क्रमितसहित एकै पटक २१ जनाले पराजित गरे कोरोना